Chii chako zano reKutenga Kwevatengi? | Martech Zone
Ndeipi yako Strategic yeKutenga Kwevatengi?
Chipiri, April 7, 2009 Muvhuro, Kukadzi 8, 2016 Douglas Karr
Mune akawanda maposita andakataura nezvazvo “Tora, chengeta uye ukure” mazano emakambani ekukudza bhizinesi ravo, asi chimwe chinhu chandisingafungi kuti ndakambonyora nezvacho ndeche kupora vatengi. Sezvo ini ndiri muindasitiri yesoftware, ini handina kumboona vatengi vachidzoka saka hatina kuisa maitiro ekuyedza kuhwina mutengi kumashure. Izvo hazvireve kuti hazvifanirwe kuitwa, zvakadaro.
Ndiri kumusangano weWebTrends Engage uye CEO Alex Yoder vakakurukura nezve marongero uye vakapora senzira yechina. WebTrends 'chiziviso chekudyidzana neRadian6 inonongedzera kuchisungo chakasimba chekudzoreredza - kwete kungoita kugona kuteerera kune izvo zviri kutaurwa nevatengi, asi inoitisa kufambiswa kwebasa kugovera mabasa nekuisa pekutanga pasocial media sosi (nesimba).
Tiri kurarama mumutengo wakaderera, huwandu hwevhoriyamu yepasi uye makambani ane nguva yakaoma yekugadzirisa nhamba hombe dzevatengi dzakapararira mumasvikiro asingaverengeke. Aya masisitimu inzira dzinodiwa dzekutaurirana zvinobudirira nevatengi vako, kugadzirisa mukurumbira wako uye kuwana tarisiro.
Mune mamwe mazwi, zvakabatanidzwa, mapuratifomu anotendera kambani kuti isango cherechedze mukurumbira-wenguva chaiyo, asi zvakare ita nekukurumidza pakukurukurirana. Uku kukunda-kwevatengi nemakambani… vatengi vanogona kuwedzera network yavo nehukama kuti makambani avateerere, kwete kungohwanda kuseri kwenhamba 1-800 ine kurudziro isingaperi yekuendesa mutengi akatsamwa mukukanganwa.
Kuyedza nzira, ini tweeted nezve WebTrends panguva yekuratidzwa uye yeWebTrends 'yega yaJascha Kaykas-Wolff akangondiwana muvateereri panguva yeKeynote uye akandiratidza kutaurwa paTwitter pane yake iPhone. Zvakanaka zvinhu! WebTrends yakazivisawo Open Exchange - yavo yakavhurika dhata chikuva inopa vatengi mukana wekupinda kune yavo data kuburikidza neAPI. Sezvo ivo vachizviisa, "Idata rako, haufanire kubhadhariswa!" (Ameni!). Vakatangisawo yavo budiriro network.
Vamwe vanogona kunetseka sehuwandu hwe data iro mabhizinesi ari kuunganidza nezve vatengi vavo. Alex akataura imwe yemakambani aanotenga kubva kwaari uye kuti ane pamusoro pezviuru zviviri zvemashoko pamusoro pake. Ini handina hanya nekuti makambani azive zvakadii pamusoro pangu… ndiri kunyanya kunetsekana kuti vari kushandisa ruzivo irworwo kundibata nani!
Iwe une nzira yekudzosa yevatengi vasiya here? Zvinotaridza sekunge mumwe munhu atoziva nezve chako chigadzirwa, kambani yako, nezvimwe angave ari mutengi akakunda kuti adzokere ... uye zvakadaro anogona kunge asingadhuri kuwana mutengi mutsva zvachose. Kana iwe uri bhizinesi rebhizinesi, iwe ungangoda kuona kuratidzwa kweRadian6 uye utarise zvakadzama pane yako analytics kusangana kuti uone kana kuri kusangana nezvido zvako.
Tags: alex yodermutengi kuporakuchengetwa kwevatengiJascha Kaykas-Wolffzvideokuhwina zvakare vatengi
Mu Vegas Muvhiki Ino paWebTrends Shingairira
Mukurumbira Management neRadian6
Apr 7, 2009 pa 3: 09 PM
Ndinoshuva dai ndanga ndiri pachiitiko ichi, saka ndatenda nepfupiso yeshoko rakakosha uyezve kunyora nezve WebTrends / Radian6 yekudyidzana chiziviso.
Ini ndinoda maonero ako pazviri sezvo zvichipa makambani ane mukana wakakura wekuvandudza basa revatengi uye zviri nani kuteerera vatengi vavo, "kwete kungovanda kuseri kwenhamba 1-800" sekutaura kwako.
Makambani anemukana wekuwedzera kuve munhu, anoteerera, uye nekuvaka hukama kuenzana nevatengi munzira nyowani kuburikidza nekuteerera online uye kupindura.
Apr 7, 2009 pa 3: 45 PM
Ndatenda zvikuru nekuve nesu kuEngage. Kunyangwe iwe wakatumira kuti yaikurumidza, handifunge kuti posvo yako inomiririra chero chinhu cherudzi.
Ndapedza ruzhinji rwebasa rangu mu software / kushambadza uye ini ndichati nzira yevatengi yekudzosa yakakosha pakubudirira kwenguva refu. Zvisinei nezvigadzirwa zvaunotengesa, chiratidzo chechokwadi chechiratidzo chinotungamira ndechekuti vanobata sei vatengi kana chimwe chinhu chikatadza kufamba. Ichokwadi kwatiri mune software zvakare.
Mune yako post iwe wakataura kuti ini ndakakuwana uye ndikakuratidza yako tweet kwauri pane yangu iphone. Yakanga iine ruzha, saka handina kuwana kutsanangura nyaya yese. Zvandakakuratidza yaive yechokwadi-nguva yambiro iyo yandakatumirwa kwandiri kuburikidza Webtrends Kuyerwa Kwemagariro inofambiswa neRadian6. Isu tinoshandisa chishandiso pachikwata changu nhasi uye tinochida; iro Radian6 timu rinotyisa kushanda naro.
Ini ndangoitika kuti ndakwanisa kuuya ndikati hesi pane kuzviita manhamba :)